February 2014 | Pyithu Hluttaw - ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒာကျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီ ကော်မတီ၏ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ၏ ဌာနေ ကိုယ်စား လှယ်ဖြစ်သူ Mr.Jurg Montani ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ၁၉-၂-၂၀၁၄ ရက် နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် ( I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သူ Mr. Robert Cooper အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် ၁၉-၂-၂၀၁၄ ရက် နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီ အချိန်တွင် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ Mr. Robert Cooper ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား ၁၈-၂-၂၀၁၄ ရက် ၁၂ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Yang Houlan လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတဂျာမနီနိုင်ငံ၊ သမ္မတ H.E. Mr. Joachim Gauck ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ သမ္မတ H.E. Mr. Joachim Gauck ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့နှင့် ၂၀၁၄၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်း မဆောင်၌ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ (၆၇) နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်အားပေး
(၆၇) နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ ၆ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိမြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန (MICC)၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် တို့တက်ရောက် အားပေးကြသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒာကျော်စွာသည် Global Leadership Foundation ၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ Mr. Roelf Meyer ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် Global Leadership Foundation၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူ (တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဟောင်း) Mr. Roelf Meyer ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့(၀၈း၃၀)နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရုံးခန်း၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဆွေ The World Bank မှ Dr. Claudia Sadoff (Lead Economist/ Water Resource Management Specialist) ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဆွေနှင့် အဖွဲ့သည် The World Bank မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ယနေ့ နေ့လည် ၁နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အဦ ရေးရာဆောင် အမှတ်(၉)ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေး၊ မိုးလေဝသဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များ၊ ရေအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်နှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အကြီးတန်းအကြံပေး Ms. Judith Cefkin အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန် ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အကြီးတန်းအကြံပေး Ms. Judith Cefkin ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့ ညနေ၄ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက် အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးH.E. Mr. Thierry MATHOU အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင် ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Thierry MATHOU အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်း မဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းအိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ၊Nagaland ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သည် အိန္ဒိယသမ္မတ နိုင်ငံ၊ Nagaland ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shri. Neiphiu Rio နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ ၄ နာရီ တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။